Mayelana-Hunan Zhonggu Isayensi Nobuchwepheshe Co., Ltd.
IHunan Zhonggu Isayensi Nobuchwepheshe Co., Ltd. ibhizinisi lobuchwepheshe elihlanganisa i-R & D nokukhiqizwa kwemishini yokuthengisa, ubuhlakani bokufakelwa, i-Intanethi Yezinto, izinsizakalo zefu, idatha enkulu, ukukhokhelwa kweselula, isoftware yomshini wokuthuthuka nokuthuthukiswa kwehardware nokwenza ngokwezifiso.Ngumhlinzeki wezixazululo zebhizinisi le-O2O. Kuyiphayona le-Intanethi + lokuzenzela ukuthengisa + imodeli yeketango lendabuko ngaphansi kwemvelo yecebo lamafu. Ngamandla ayo amakhulu enkampani nezinga lobuchwepheshe, iZhonggu isetshenziswa emazweni angaphezu kwayi-100 nendawo.
I-ZOOMGU manje inamamitha-skwele angaphezu kwama-200,000 wezakhiwo zefektri, futhi njengamanje inempahla engaguquki yama-yuan angaphezu kwezigidi ezingama-500 namandla okushintsha okukodwa amayunithi angama-300,000 / ngonyaka. Njengomkhiqizi omkhulu womshini wokuthengisa emhlabeni imishini yensimbi enamandla nokukhiphayo, kanye nolayini bokukhiqiza abaningi benziwa ngokubambisana. Inolayini wokufafaza osebenzelana ngokuphelele nemvelo, ulayini wokugcina wokuhlangana, ulayini we-U-shell othomathikhi, kanye nolayini womhlangano othomathikhi. Umugqa wensimbi wokukhiqiza umugqa, umugqa wokukhiqiza umjovo wokubumba.